ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ ကိုးရီးယားမှာ ပညာရှာ ~ pyidawoo
6:50 AM Pyidawoo No comments
... ပညာသင်ဆုရ ကျောင်းသား ၄ယောက်
...ဒီနှစ် ကိုးရီးယားမှာ ကျောင်းသားလေးယောက် စကောလာရအောင် စီစဉ်ပေးနိူင်ခဲ့ ပါတယ်။ PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY ကိုရီးယားဘာသာ မဟာဝိဇ္ဇာတန်းမှာပါ။ ၂၀၁၂ နွေဦး ပညာသင်နှစ်ကနေစပြီး ကျောင်းတက် နေကြပါပြီ။ ကိုရဲသီဟ၊ မခင်သူဇာ၊ မခိုင်စုကြွယ်နဲ. မလဲ့ရည်ထွန်းတို.ပါပဲ။
လဲ့ရည်ထွန်း ကလွဲရင် ကျန်သုံးယောက်လုံးက ရန်ကုန် နိူင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်ကနေ ကိုရီးယား ဘာသာနဲ. ဘွဲ.ရခဲ့ကြသူတွေပါ။ လဲ့ရည်ထွန်းကတော့ အင်္ဂလိပ်စာမေဂျာနဲ. ဒဂုံတက္ကသိုလ်ထွက်ပါ။ ငယ်မွေး ခြံပေါက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ရန်ကုန် စန်းမြသီတာရိပ်သာယောဂီဖြစ်တဲ့အပြင် ကိုရီးယားဘာသာကို ပြည်တော်ဦး မြန်မာ-ကိုရီးယားလူငယ်ဖွံ.ဖြိုးရေးကျောင်း ကိုရီးယားဘာသာစကားသင်တန်းမှာ ဆရာဇော်မြင့် ဆီကနေ စတင်သင်ယူခဲ့ပြီး ဒီကိုမလာခင်အထိ ပြည်တော်ဦးမှာ ဆရာမအဖြစ် သင်ကြားရေးတာဝန် ယူခဲ့လို.ပါ။ KOICA က ကျင်းပပေးတဲ့ ကိုရီးယား စကားပြောပြိုင်ပွဲမှာလည်း ပထမဆု ရခဲ့သူပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီမှာ စကောလာ ရဖို. TOPIK လယ်ဗယ်4 လိုတယ်ဆိုတော့လည်း ၆လအတွင်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နဲ.တရုတ ဘာသာစကားလည်း အထိုက်အလျောက် ရပါသေးတယ်။ ဆိုတော့ တော်တော်ကြိုးစားတဲ့ ကလေးမလေးပါပဲ။ ဒီလို ကလေးမျိုးတွေကို ကူညီခွင့်ရခဲ့တဲ့ အတွက် အင်မတန် ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
ရဲသီဟ ဆိုလည်း သူ.ကျောင်းနေဘက် (ပြည်တော်ဦးကိုရီးယားသင်တန်းဆရာ) ဇော်မြင့်နဲ.အောင်ကိုလတ် တို. ဘုန်းကြီးရဲ. ရန်ကုန် စန်းမြသီတာမဟာစည်ရ်ိပ်သာမှာ ရဟန်းခံတရားအားထုတ်စဉ်ကတည်းက သိကျွမ်း ခဲ့ပြီး ပြည်တော်ဦး ကိုရီးယား သင်တန်းမှာလည်း သူရဲ. ဂျီးန်ဆော်င်း ကိုရီးယားဘာသာစကားစာအုပ် များကို လာရောက် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့သူပါ။ နောက် ကိုရီးယားမှာ အလုပ်လုပ်ဖို. ရောက်လာပြီး ဂွမ်းဂျူး လစဉ် တရားပွဲစတဲ့ ဘုန်းကြီးရဲ.သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာ တတပ်တအား ပါဝင်ခဲ့သူပါ။ အလုပ်သမားအဖြစ်နဲ.နေတာထက် ပညာရေးလိုင်းကိုပဲ လိုက်သင့်ပါတယ်လို. သူ.ရဲ.စရိုက်နဲ. စာပေအရေးအသား သုတေသန လက်စလက်နကိုသိနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကပဲ တိုက်တွန်းပြီး ကျောင်းတက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သူ.ကို လူမှန်နေရာမှန်မှာ တွေ.ရလို. စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
ခင်သူဇာ ကလည်း (ပြည်တော်ဦးကိုရီးယားသင်တန်းဆရာ) ဇော်မြင့်၊ ရဲသီဟ၊ အောင်ကိုလတ်တို.နဲ. ကျောင်းနေဖက်ဖြစ်တဲ့အပြင် မဟာစည်ရိပ်သာကြီးမှာ ဆရာဇော်မြင့် မလုပ်နိူင်တော့တဲ့နောက်ပိုင်း ဇော်မြင့်ရဲ. မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ.ပဲ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဆရာတော်ဘုရားများ ကိုရီးယားရဟန်းရှင်လူ ယောဂီတွေကို တရားဟော/ပြရာမှာ ဘာသာပြန်အဖြစ် ဒီကို မလာခင်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ သူပါ။ အဲဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ.ပဲ ကိုရိးယားမှာ လာရောက်ပညာသင်ခွင့်ရအောင် အကူအညီပေးသင့်တယ်လို. မြင်ပါတယ်။ မိမိတို.တတ်မြောက်တဲ့ပညာနဲ. သာသနာ အကျိုး သယ်ပိုးခဲ့တဲ့သူတွေကို ဂုဏ်ပြုခွင့်ရလို. အင်မတန် အားရကြေနပ်ပါတယ်။ခိုင်စုကြွယ် ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးကလည်း သူ.ကံနဲ.သူပါပဲ။ ကျောင်းသား လေးယောက် ပညာသင်ဆု ရမှာကို အရင်လျာထားတဲ့သူတွေ အကြောင်းအမျိုးမျုိးနဲ. အဆင်မပြေဘဲ တစ်ယောက်လိုနေပါတယ်။ သူ.အတွက် သက်သက်ချန်ပေးထား သလိုပါပဲ။ သူက ကိုရီးယားဘာသာနဲ.ဘွဲ.ရ TOPIK လယ်ဗယ်၎အောင်ပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ကျောင်းလျှောက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်း ကပ်သီးကပ်သပ် အချိန်တိုလေး အတွင်းမှာပဲ အချိန်မီ ပြီးအောင်လုပ်နိူင်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီပညာသင်ဆုကို ပြည်တော်ဦးက ကိုရီးယားဘာသာ သင်တန်းဆရာတွေအတွက် သီးသန်.စီစဉ်ပေးတာပါ။ ဆရာဇော်မြင့်က သူ.ကိုယ်ပိုင် သင်တန်းမှာ ကျောင်းသား တအားများနေတဲ့အတွက် ဒီကိုလာ ကျောင်းတက်ဖို. အစီအစဉ် ဖျက်လိုက်ရပါတယ်။ ဆရာကျော်ဇံဝင်းနဲ. ဇာရည်နွယ်က TOPIK လယ်ဗယ်၎ အဆင်သင့် မဖြစ်သေး။ ဖြူသွယ်ထွန်းညီမ မေသွယ်ထွန်းက ဖခင် ကျန်းမာရေးကြောင့်ပျက်ဆိုတော့ ကံနဲ.လူ မပူနဲ. ဆိုတာလို ခိုင်စုကြွယ်အတွက် သီးသန်. တယောက်စာ ချန်ထားပေးသလိုပါပဲ။ ဒီကလေးမလည်း ထက်ထက် မြက်မြက်နဲ. လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိသူပါ။ သူတို.လေးတွေ ပြည်ပမှာ ပညာသင်ပြီး ပြန်သွားရင် အမိမြန်မာပြည်အတွက် တအားတက်စရာ ကောင်းတဲ့သူတွေ မုချ ဖြစ်မယ်လို. ယုံကြည်ပါတယ်။
အခု သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ ဇော်မြင့်တို. အောင်ကိုလတ်တို. ကိုရီးယားကို အလည် ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဇော်မြင့်ကိုတော့ ဘုန်းကြီးကပဲ လာဖို. စီစဉ်ပေးတာပါ။ အလုပ်သမားဝန်းကြီးဋ္ဌာနကနေ အလုပ်သမား အားလုံးကို ကိုရီးယားမထွက်ခင် အနီးကပ် ၇ရက်သင်တန်းပေးရာမှာ ဆရာဇော်မြင့်တို. သင်ပေးရပါတယ်။ ကိုရီးယားကို လာမယ့်သူအားလုံးကို လာခါနီးမှာ သင်ကြားခွင့်ရမယ့် အဲဒီလို ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ. ကိုရိးယားကို ရောက်ကိုရောက်ဖူးသင့်တယ်။ ဒီက အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စက်ရုံ အနေအထား ဥပဒေများ အပြင် ယဉ်ကျေးမှု လူနေမှု ဘဝစသည်များကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ.ခံစားပြီး သင်ကြားပို.ချပေးနိူင်ရင် ဒီကို လာမယ့်သူတွေအတွက် အလွန်အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်လို. ယုံကြည်လို.ပါ။ နောက် မဟာစည်ရိပ်သာကြီးနဲ. ပြည်တော်ဦး လူငယ်ဖွံ.ဖြိုးရေးကျောင်းတွေမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့/ဆောင်ရွက်ဆဲ သူ.ရဲ. ပရဟိတ ပညာဒါန လုပ်ငန်းများကို ဂုဏ်ပြုချင်တာပါ။ ဒီစာရေးသားနေချိန်မှာ ဇော်မြင့်တစ်ယောက် ဂျဲဂျူးကျွန်း ရောက်နေလို. ကိုရီးယားရဲ. အလှဆုံးကျွန်းမှာ အလှဆုံးရာသီရဲ. အလှတရားများကို တဝကြီး ခံစား အနားယူနိူ်င်ပါစေလို. ဆန္ဒမွန်ပြုလိုက်ပါတယ်။
အခုလို ကိုရီးယားမှာ ဇော်မြင့် ရဲသီဟ အောင်ကိုလတ်နဲ. ခင်သူဇာတို.ကို တွေ.ရတော့ သူတို.တွေရဲ. ကျောင်းနေဘက် ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ကျော်လှိုင်ထွန်းတို. ထွန်းဝင်းတို. မြန်မာသံရုံးက ခင်လေးတို.ကိုလည်း သွားသတိရ ပါတယ်။ ကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ. အတူဘွဲ.ရခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စု အခုလို အကြောင်းကိုယ်စီနဲ. ကိုးရိးယားကို ရောက်လာကြမယ်လို. လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါး ဆယ်နှစ်က သူတို. ဘယ်သူမှ တွေးမိမယ်မထင်ဘူး။ ဒီလိုပဲ နောက် လေးငါး ဆယ်နှစ်မှာရော သူတို.တွေ ဘယ်တွေရောက် ဘာတွေဖြစ်ပြီး ဘာတွေ လုပ်နေကြ မလဲဆိုတာ တွေးမိကြမယ် မထင်ဘူး။ အားလုံးပဲ လောကီလောကုတ္တရာအကျုိး အမျိုး ဘာသာသာသာနာအကျိုး သယ်ပိုးနိူင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို. ဆန္ဒပြုရင်း ဒီ ပညာသင်ဆု ပညာပါရမီ အမှု အတွက် မုဒိတာစကားကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Posted in: သတင်း,ဆောင်ပါးများ